Kedu ka onye ahịa Amazon na-arụ ọrụ?
Iji nye ndị ahịa ihe kacha mma ahịa, Amazon na-agbanwe agbanwe ahịa. Ọ na-enye ohere maka ndị ọrụ ịzụta ngwaahịa ha chọrọ maka ịsọ mpi. Ọzọkwa, ụfọdụ ngwá ọrụ pụrụ iche na-ahụ maka mgbanwe ọnụahịa maka otu ngwaahịa. Dị ka ọmụmaatụ, ngwanrọ ịntanetị a na-akpọ CamelCamelCamel na-enye ndị ahịa ihe ngosi na nwelite ọ bụla ma ọ bụ tụda ego. Enwekwara ihe omume ndị ọzọ na-enye ihe ntanetị nke Amazon bụ ndị na-eme ka ọ dị mfe ịmalite ike ikike na Amazon.
Na nke a dị mkpirikpi, anyị ga-atụle ọkachamara ọkachamara Amazon na-achọpụta ngwá ahịa na ngwá ọrụ nyocha Amazon.
Ngwaahịa ndị na-ere ahịa Amazon
Onye ọ bụla na-ere ahịa n'Ịntanet kwesịrị ịnọgide na-agbaso usoro mgbasa ozi ya kachasị mma ma gbasaa uru zuru oke maka oge ọ bụla. Na paragraf a, anyị ga-atụle ngwá ọrụ Amazon kachasị dị irè nke nwere ike iwetara gị ụgwọ ọrụ dị elu. Ọ bụ ihe ezi uche dị na iji ngwa nsuso ndị a dị mgbagwoju anya ka ha na-agbarịta ibe ha ume ibe ha ma nwee ike inyere gị aka iji okpukpu abụọ enweta ego Amazon.
Nchịkọta ngwá ọrụ nyocha
Iji nweta ọkwa dị elu na peeji nke ọchụchọ ọchụchọ Amazon, ịkwesịrị ilebara anya nchịkọta ndepụta gị. Ejiri ngwá ọrụ a iji nyere gị aka ịmepụta ndepụta dị mma-nke kachasị mma-ịchọta ma gbasaa ọnụego ntọghata gị, nke bụ otu n'ime usoro ndị mbụ Amazon. Ngwaọrụ a ga - enyere gị aka ime ka tweaks dị irè iji bulie ahịa gị ma meziwanye usoro ndị ọzọ Amazon dị otu ntabi anya.
Notifications reviews notification
Ọnụ ọgụgụ na mma nke nyochaa Amazon gị na-arụ ọrụ dị oke mkpa maka nhazi ọnọdụ gị. N'ihe nyochaa dị mma nke ị nwere, ndị ọrụ kachasị elu ga-azụta ngwaahịa gị. Ọ pụtara na nyocha ndị na-ezighị ezi nwere ike ịba ụba ọnụ ma mee ka ọkwa dakọtara. Nyocha ọjọọ na-eme na Amazon, ọ bụrụgodị na ị nwere ngwaahịa kacha mma. Ịkwesịrị iji aka gị niile nyochaa na-adịghị mma maka ijikwa ọnọdụ ahụ.
AMZ Tracker's Negative Review Notifications seller tool will give you with notifications every time someone leaves a negative feedback. Ọ ga - enyere gị aka ozugbo ime ihe niile na - ezighị ezi na - eme ihe niile dị gị n'aka iji dozie nsogbu ndị ị na - ahụ n'oge na - adịbeghị anya. Ọ bụrụ na ị nwere ike idozi nsogbu onye ahịa ngwa ngwa, ha ga-agbanye ma ọ bụ gbanwee nyocha mbụ ahụ.
Mee ngwa ngwa nke azụmahịa Amazon site na nchịkọta
Amazon Analytics bụ ngwá ọrụ ọkachamara ọkachamara maka ndị na-ere ahịa na-eto eto maka azụmahịa gị Amazon. Ngwá ọrụ a na-enye gị ohere iji nyochaa ndị ahịa ịzụta omume maka mkpara gị ma chọpụta oge ezoro ezo na-ewu ewu. Ihe natara data ga enyere gi aka iduzi mgbasa ozi PPC Amazon. Ọzọkwa, AMZ Analytics na-enyere aka ime nchọpụta isiokwu ma gosipụta nke ọchụchọ na-eme nke ọma na nke a ga-eburughachi. Site n'enyemaka nke nchịkọta Analytics Amazon, ị nwere ike nyochaa ego gị ga enweta maka izu ọ bụla, ọnwa, ma ọ bụ afọ. Ọ ga-egosi gị ihe ngwaahịa na-eme nke ọma na ebe azụmahịa gị chọrọ nhazigharị Source .